Warar ku saabsan iPhone | Warka IPhone (Bogga 10)
Angela Ahrendts inay ka tagto Apple bisha Abriil
Angela Ahrendts, ayaa ka tagi doonta Apple bisha Abriil si ay nafteeda ugu biiriso caqabado kale oo shaqsiyadeed. Deirdre O'Brien waxay ku sii jirtaa booskeeda maareeyaha dukaanka.
Kuwani waa Animoji cusub ee macruufka 12.2 betas
Apple waxay ku dartay afar Animoji cusub beta-kii labaad ee iOS 12.2, iyadoo lagu daray in ka badan 20 horeyba loogu heli jiray iOS 12.1
Apple wuxuu bilaabay inuu ku iibiyo adapters-ka 'Ethernet' oo leh Lighning
Apple waxay bilawday inay iibiso adapters kuu ogolaanaya inaad iskuxidho fiilada Ethernet iyo hillaaca isla markaa isla markaasna lagaa qaado oo aad bixiso iskuxirka shabakada
Hadda waxaad ka iibsan kartaa iPhone X-ka ugu jaban qaybta Apple ee dib loo hagaajiyay
IPhone X weli waa badeecad la doonayo marka la eego dhowr sheeko oo ku saabsan naqshadeynta iyo qalabka guud ahaan ...
Apple wuxuu rukhsad u leeyahay dareeraha gaaska deegaanka iyo sunta ee iPhone iyo aaladaha kale
Patent ka diiwaangashan Apple ayaa soo jeedinaya in shirkaddu ay ku shaqeyn karto aalad dareeme gaas sun ah ku leh deegaanka.
Bill Stasior, ayaa ka tagaya Apple kadib 7 sano oo uu hogaaminayay kooxda Siri
Bixitaankii maareeyaha Siri Bill Stasior toddobadii sano ee la soo dhaafay wuxuu dhigayaa Jhn Giannandrea safka hore ee kaaliyaha horumarka
Apple ayaa raaligalin ka bixisay fashilka FaceTime waxayna ku dhawaaqday in todobaadkan ay dib u howlgelin doonto adeega
Shirkadda ayaa raaligelin siisay qoyskii ogaaday dhibaatada FaceTime iyo dhammaan dadka isticmaala ee ay dhibaatadu ka soo gaadhay cayayaanka.
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha iOS 11 waxay dhibaato ku qabaan App Store
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha iOS 11 waxay la kulmaan dhibaatooyin helitaanka adeegyada Apple sida iOS App Store iyo dabcan Apple Music.
WhatsApp waa la cusbooneysiiyaa oo wuxuu taageeraa Aqoonsiga Face
WhatsApp horeyba waxay kuu ogolaaneysaa inaad isticmaasho FaceID si aad uhesho arjiga. Waxaan kuu sharxeynaa sida loo hawlgeliyo shaqadan si aan qofna u arkin fariimahaaga ogolaansho la'aan
Fikradan ayaa ina tusaysa waxa jiilka 7-aad ee iPod Touch noqon karo
Xogta la daadiyay waxay soo jeedineysaa inaan dhowaan arki doonno jiilka 7-aad ee iPod Touch oo leh shaashad la mid ah iPhone-ka hadda jirta oo aan lahayn Aqoonsi Face ah.
John Gruber wuxuu sheeganayaa Apple TV 4K waxaa lagu iibiyaa qiimo iyo HomePod ma sameyso lacag Apple
Ereyada suxufiga ku takhasusay Apple ayaa cad oo wuxuu sharaxayaa in Apple TV iyo HomePod aysan Apple siin lacag
Miyaad cusbooneysiisaa codsiyada oo ay markale u muuqdaan inay cusbooneysiinayaan? Adiga kaligaa ma tihid
Dhibaato ka jirta cusbooneysiinta barnaamijyada qaarkood waxay saameyneysaa dhowr isticmaale oo isku dayaya inay cusbooneysiiyaan oo ay sii muuqdaan iyagoo aan cusbooneysiin
Apple waxay iibisaa 14,5 milyan oo Ipad Kirismaska, wali aad ayey u nooshahay
Apple waxay ahayd inay iibiso ilaa XNUMX milyan oo halbeegga iPad-ka inta lagu gudajiray rubucii ugu dambeeyay ee sanadka, oo ay kujiraan xilliga ciida masiixiga.
Muranka weligiis ah: Apple waxay rabtay Chips Qualcomm, laakiin lama iibin
Madaxa hawlgalka Apple, Jeff Williams, wuxuu sharraxay inta badan xiriirka ay la leeyihiin Qualcomm: ma aysan dooneynin inay ka iibiyaan iyaga chips 2018
Apple wuxuu geeyay ku dhowaad 66 milyan oo iPhone ah rubuca kirismaska
Falanqeeyayaashu waxay bilaabayaan inay sameeyaan xisaabinta ugu horeysa waxayna cadeeyeen in Apple ay ahayd inay soo dirto qiyaastii 66 milyan oo iPhone ah ilaa Kirismaska.
Samsung waxay si ballaaran u soo saartaa xusuusta 1TB, ee loogu talagalay iPhone?
Samsung waxay diyaarineysaa waxsoosaarka guud ee xusuusta 1TB ee boosteejooyinka mobilada, kuwani ma gaari doonaan iPhone iyo iPad?
Diiwaangelinta App Store: horumariyeyaashu waxay sameyn lahaayeen 120 bilyan oo doolar tan iyo 2008
Ragga ka socda Cupertino waxay ku dhawaaqayaan faa'iidooyinka ay u soo gudbiyeen horumariyeyaasha iyada oo ay ugu wacan tahay dakhliga App Store: 120 bilyan oo doolar.
Tim Cook wuxuu ka hadlayaa qiimaha IPhone: "Waxaan u maleynayaa inay tahay arrin"
Maamulaha Apple Tim Cook wuxuu rumeysan yahay in qiimaha iPhone-ku uu muhiim u yahay suuqyada qaarkood ee soo ifbaxaya halkaasoo sarifka lacagta si daran u saameynayo qiimaha.
Jaybird wuxuu bilaabayaa Run XT dhagaha dhagaha dhagaha leh ee 'True Wireless headphones'
Aynu jaleecno samaacadaha dhagaha leh ee tayada leh ee loogu talagalay ciyaartooyda, Jaybird RUN XT oo sidoo kale ah 'True Wireless'.
Corning waxay kordhineysaa macaashka inkasta oo Iibinta Taleefanka iphoneku hooseeyo
In kasta oo hoos u dhac ku yimid iibka iPhone-ka adduunka oo dhan, iibiyaha Corning wuxuu kordhiyay macaashkiisa sanadkii la soo dhaafay.
Apple wuxuu daabacaa "Wareeg buuxa", xayeysiiskiisa cusub ee lagu duubay 32 iPhone XR
"Wareeg buuxa" waa xayeysiiska cusub ee Apple ee hoos imanaya taxanaha "Shot on iPhone XR". Waxaa lagu duubay 32 iPhone XR isku mar.
Xenowerk waa ciyaar ficil fiican oo waqtiga lagu dhaafinayo
Waxaan idiin soo bandhigayaa Xenowerk, ficilka zenith iyo xamuul farabadan si aan u badbaadiyo adduunka.
IPad Mini 5 cusub ayaa la jaan qaadi doona qalinka Apple iyo Smart Keyboard
Sida ku cad xogtii ugu dambeysay, iPad Mini 5 cusub wuxuu la jaan qaadi doonaa qalinka Apple iyo Smart Keyboard, iPad Pro Mini?
Apple waxay u oggolaan kartaa rukhsadda si ay u soo dejiso adeegyada fiidiyowga iyada oo loo marayo barnaamijka TV-ga
Ragga ka socda Cupertino waxay jeclaan lahaayeen inay noo soo bandhigaan inaan bixinno kharashka adeegga saddexaad ee fiidiyoowga loogu sii daayo Apple TV-ga iyo barnaamijka TV-ga.
Horumariyayaashu waxay horey uga kasbadeen $ 120.000 bilyan App Store
Sida laga soo xigtay shirkadda Cupertino, horumariyayaashu waxay mar hore kasbadeen in ka badan $ 120.000 bilyan iyada oo loo marayo IOS App Store.
Cilad daran oo FaceTime ah ayaa kuu oggolaaneysa in lagu maqlo adigoon wicitaanka aqbalin
Waxay u muuqatay in iOS 12 uu baxsanayo iyada oo aan cillad amni oo halis ah jirin, laakiin ma uusan iska caabin oo wuxuu ...
Dhamaan wararka ay tahay inaad ka ogaato iOS 12.2
Nala jooga oo la soco tilmaantan saxda ah maxay yihiin dhammaan wararka ku yimid iOS 12.2 sidaa darteed waxaad go'aansan kartaa inaad cusbooneysiiso iyo in kale.
IPads-yada soo socda ayaa laga yaabaa inaysan laheyn Aqoonsi Face ah
IPad-ka cusub iyo iPad Mini ee tufaaxa weyn ma lahaan doonaan aqoonsi Face ah laakiin taabashada taabashada, sida ku cad koodhka laga helay beta-ka iOS 12.2.
Adobe Photoshop Sketch iyo Illustrator Draw for iPad ayaa hadda la jaan qaadaya Apple Pencil 2
Adobe wuxuu cusbooneysiiyaa labo ka mid ah barnaamijyadeeda ugu caansan ee loo yaqaan 'Photoshop Sketch and Illustrator Draw', taasoo ka dhigeysa inay la jaan qaadi karaan qalinka cusub ee Apple 2
Istaraatiijiyadda Istaraatiijiyadeed waxay muujineysaa xogta tirada IPhone-yada lagu iibiyo Shiinaha
Waad ku mahadsan tahay warbixinta ay daabacday Istaraatiijiyada Istaraatiijiga ah waxaan arki karnaa in Apple uu iibiyey wax ka yar iPhone-ka 2018 Shiinaha marka la barbar dhigo xogta 2017.
Apple waxay dhiirrigelisaa Apple Pay Cash inkasta oo si gaabis ah loo ballaariyo
Shirkadda Cupertino waxay abaabushay olole ay ku dhiirrigelinayso Apple Pay Cash in si ballaadhan loo ballaariyo.
Patent cusub oo loogu talagalay iPod Touch wuxuu la xiriiraa qalabka ciyaaraha
Diiwaangelin cusub oo patent ah si loo ilaaliyo magaca iPod Touch ayaa ka muuqda Xafiiska Patent-ka Mareykanka ee ay diiwaangelisay shirkadda Apple
Apple wuxuu bilaabay Beta-kii ugu horreeyay ee iOS 12.2 iyo watchOS 5.2
Apple wuxuu markale ku bilaabayaa beta beta noocyada cusub ee iOS 12.2 iyo watchOS 5.2, oo ay weheliso tvOS 12.2 iyo macOS 10.14.4
Apple ayaa weli ah shirkadda loogu qadarinta badan yahay sannadka laba iyo tobnaad oo xiriir ah
Sannadkii laba iyo tobnaad ee isku xiga, shirkadda ugu qiimaha badan ayaa mar kale noqotay Apple sida ku cad daabacaadda Fortune ka dib markii ay wareysatay in ka badan 3700 maamulayaal
Ganacsiyadu waxay sii wadaan inay ku tiirsanaadaan iPhone-ka wax soo saar 2019
Sanadka 2019, kala badh agaasimayaasha shirkadaha waaweyn waxay sii wadi doonaan ku tiirsanaanta aaladaha iOS si loo siiyo shaqaalahooda.
Samsung sidoo kale hoos uma dhigi doonto qiimaha, Galaxy S10 wuxuu ahaan doonaa mileuristas
Sida laga soo xigtay xogaha ugu dambeeyay, Samsung Galaxy S10 waxay ku kici doontaa in ka badan 900 euro qaabkeeda soo gelitaanka waxayna gaari doontaa 1.600 qaabka ugu sarreeya.
Iibiyay dhowr saacadood gudahood dhammaan saamiyada iPhone SE
Apple waxay si buuxda u daashay keydkii iPhone SE ee ay ku bilaawday qiimo dhimis inkastoo khilaafkii ka dhashay.
Shaqaalaha ugu firfircoon Apple waxay heli doonaan suunka Watch
Apple waxay go'aansatay inay siiso suunka u gaarka ah Apple Watch shaqaalaha ugu firfircoon bishan.
WhatsApp wuxuu ku xaddidi doonaa farriinta gudbinta illaa 5 wada hadal
Codsiga farriinta caanka ah ee WhatsApp wuxuu bilaabaa inuu mamnuuco gudbinta in ka badan 5 farriimo oo u dhexeeya dadka isticmaala si looga fogaado wararka been abuurka ah
GoodNotes 5 waxaa lagu cusbooneysiiyaa bilaash iyadoo dib u naqshadeyn lagu sameynayo isku xirkeeda
Ragga ku jira GoodNotes waxay barnaamijkooda ku cusbooneysiiyaan nooca shanaad iyagoo wata naqshad cusub, waxaan hadda ku heli karnaa bilaash haddii aan haysanno GoodNotes 4.
Spotify ayaa kuu oggolaan doonta inaad xannibo fannaaniinta sii deynta mustaqbalka
Iyada oo ay weheliso adeegyada qulqulka muusikada iyo talooyinkooda, sidoo kale waxaa jira qayb taban. Dhageyso fanaaniinta oo ...
Kaamiro iswada oo cusub iyo qaabab kala duwan oo lagu sawiro iPhone XI
IPhone XI wuxuu yeelan doonaa kamarad Selfie ah oo aan ka yarayn 10 MP sidoo kale wuxuu helayaa warar ku saabsan nashqadaynta Motherboard-keeda.
Khariidadaha Google ayaa ugu dambayntii ku guulaysta xadka xawaaraha iyo digniinta kamaradda xawaaraha leh
Hadda Khariidadaha Google waxay isku darayaan digniinaha xaddidaadda xawaaraha iyo sidoo kale shucaacyada si loo hagaajiyo badbaadada adeegsadayaasha.
Musish, oo ah nooc web aan rasmi ahayn si loogu raaxeysto muusikada Apple Music
Apple ma laha nooc web ah oo loogu talagalay Apple Music. Taasi waa sababta ay tahay inaan u isticmaalno noocyo aan rasmi ahayn sida Musish-ka cusub.
Foxconn waxay jareysaa 50.000 shaqooyin ku meel gaar ah sababo la xiriira iibka iPhone oo liita
Warshada caanka ah ee Shiinaha ayaa shaqada ka joojin doonta ilaa 50.000 kun oo shaqaale qandaraasyo ku meel gaar ah sababo la xiriira tirooyinka iibka ee liita ee ay heleen iphone-yada cusub
IPhone XI Max wuxuu lahaan lahaa batari 4000 Mah ah iyo shaashadda 120 Hz
Macluumaad cusub ayaa la daabacay oo ku saabsan waxa loo malaynayo iPhone XI Max inuu yeelan doono batari weyn, saddex kamaradood iyo lacag degdeg ah oo ah 15 W.
Kuwa waaweyn ee warshadaha filimada, marka lagu daro Apple, waxay u dagaallamaan adeegyada JJ Abrams
Shirkadda wax soosaarka ee JJ Abrams 'Bad Robot' waa ujeedka ay u rabto Hollywood kasta oo weyn maanta, oo ay ku jiraan Apple.
Waqtiga TV-ga wuxuu ku darayaa astaamo wuxuuna bedelayaa qaabeynta cusbooneysiinta ugu dambeysa
Waqtiga TV-ga wuxuu helay casriyeyntii ugu dambeysay oo kudareysa shaqeynta barnaamijka waxyarna ka badalaysa naqshadda iOS.
Louis Vuitton wuxuu bilaabayaa samaacado dhegaha lagu qoslo for 700
Louis Vuitton wuxuu go'aansaday inuu bilaabo qaar ka mid ah tartamayaasha AirPods qiimo aad u qosol badan iyo naqshadeynta waxa ay bixiyaan.
ING waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeysaa inay heleyso Apple Pay dhawaan
Sugitaan dheer ka dib, macaamiisha ING waxay helayaan warka sheegaya in Apple Pay ay la jaan qaadi karto kaararkooda dhawaan
IPhone XS Max wuxuu ka tagayaa mustaqbalka Galaxy S10 + sida ku cad Benchmarks
Sida laga soo xigtay macluumaadka ugu horreeya, iPhone XS Max wuxuu bixin doonaa waxqabad wanaagsan iyo awood ka weyn mustaqbalka Galaxy S10 +.
XUQUUQDA: Kiiska cusub ee Batteriga Smart wuxuu leeyahay awood ka badan kuwii hore
Apple mar kale ayuu sameeyaa, Kiiska cusub ee Battery Smart wuxuu xitaa ka yaryahay bateriga noocyadii hore ee badeecada.
Apple waxay bilaabi doontaa heshiiskeeda shirkadda wax soo saarka ee A24 oo ay la keenayaan filim ay wadaan Sofia Coppola iyo Bill Murray
Apple ayaa siisay layaabka iyadoo ku dhawaaqday in filimkiisii ​​ugu horreeyay ee shirkadda soosaarka indie A24 uu noqon doono filimka soo socda ee Sofia Coppola oo ay la wado Bill Murray.
Fiidiyow: tani waxay noqon kartaa iPhone-ka soo socda ee Apple: iPhone XI
Waa tan fikradda koowaad ee iPhone XI. Qalabku wuxuu lahaan doonaa seddex kamarad xaga dambe iyo qadar yar xagga hore.
Netflix waxay diyaarisaa kor u kaca qiimaha ugu weyn ee waqtiga oo dhan
Dalka Mareykanka, Netflix wuxuu sameyn doonaa koror ilaa 20% ah qiimaheeda, waana wax dhowaan gaari kara Spain.
DuckDuckGo wuxuu u adeegsan doonaa Khariidadaha Apple baaritaanka isku dhafan
Hadda DuckDuckGo wuxuu dhexgeli doonaa Khariidadaha Apple sida mashiin raadinta goobaha, isbahaysi xiiso leh oo ku saabsan asturnaanta.
Apple wuxuu soo bandhigayaa Kiis cusub oo Battery Smart ah oo loogu talagalay iPhone XS, XS Max iyo XR
Apple ayaa horeyba u soo saartay Kiiska Battery-ga Smart for iPhone XS, iPhone XS Max iyo dabcan iPhone XR oo leh qiimo waali ah.
Maxkamadda Mannheim waxay meesha ka saartay dacwaddii Qualcomm ee ka dhanka ahayd shirkadda Apple
Markii ugu horreysay ee dagaalka sharci ee u dhexeeya Apple iyo Qualcomm ee Jarmalka, maxkamad ayaa ku raacsan Apple oo laashay dacwadda Qualcomm
Norway waxay baareysaa in Tidal uu been ka sheegayo tirooyinkiisa bilooyin
Tidal ayaa had iyo jeer lagu daboolay wax qarsoon, hadda Norway waxay darsaysaa in Tidal uu been ka sheegayo aragtidiisa iyo xogta isticmaalaha.
Cusbooneysiinta 'Instagram' si loo waafajiyo xallinta iPhone XR iyo XS Max
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee 'Instagram' waxay dib-u-habeyn ku sameysaa shaashadda shaashadda iPhone XR iyo iPhone XS wax badan kadib cusbooneysiinno badan.
HomePod wuxuu ka degi doonaa Shiinaha Jimcaha soo socda, Janaayo 18
Shiinaha iyo Hong Kong waxay helayaan HomePod, afhayeenka Apple ee caqliga badan, kaasoo garaaci doona dukaankooda Jimcaha, 18-ka Janaayo.
Wuxuu iibiyay kilidiisa si uu u iibsado iphone, hada wuxuu ku noolyahay mashiin
Hada ninka dhalinyarada ah ee u dhashay Shiinaha ee iibiyay kilyaha si uu u iibsado iphone ayaa naafo ah wuxuuna ku nool yahay mashiinka sifaynta kalyaha.
Amazon waxay ku daawaneysaa inaad ku nooshahay alaabteeda Ring
Sida muuqata Ring (oo ay leedahay Amazon) ayaa u oggolaanaya shaqaalaheeda inay marin u helaan baahinta tooska ah ee kamaradaha macaamiishooda.
AirPower ayaa imaan doonta waxyar kadib markay gasho wax soo saar ballaaran
Apple waxay bilaabi lahayd soosaarid ballaaran oo ah dekedda lacag la'aanta ah ee loo yaqaan 'AirPower' oo ka socota Luxshare iyo Pegatron.
Kuwani waa sababaha aad u jeclaan doonto WiFi 6 iPhone-kaaga cusub
Nala joog oo soo hel sababta WiFi 6 uu muhiim u yahay oo aad u ogaatid waxtarkeeda ka hor inta aan la soo bandhigin iPhone-ka 2019.
Plex wuxuu rabaa inuu kasbado suuqa isagoo ku siinaya filimo iyo taxane xayeysiis aaladahayaga ah
Ragga ku jira Plex waxay ka fekerayaan inay kacdoon ku sameeyaan suuqa fiidiyowga ee qulqulaya iyagoo bilaabaya filimaan iyo taxane bilaash ah oo xayeysiis ah.
IPhone-ka 2019-ka wuxuu yeelan karaa 'darajo' yar 'mahadsanidiisa' AMS
AMS waxay naqshadeysay aalad infrared cusub oo noo oggolaaneysa inaan macsalaameyno qaddarinta iPhone X maadaama ay u oggolaaneyso inay ku shaqeyso shaashadda OLED.
Tiyaatarka Steve Jobs wuxuu martigalin doonaa shirkii sanadlaha ahaa ee saamileyda March 1
Ikea si ay u daahfuraan daahyada casriga ah iyo daahyada HomeKit bisha Febraayo
CES-kan 2019 waa mid cajiib ah marka la eego otomaatiga guriga iyo is-dhexgalka guriga, wararka ku saabsan ...
Adeegga telefishanka ee Apple ayaa imanaya sannadkan 2019
Wax walba macno ayey leeyihiin haddii aan ogaanno waxa muuqda, Apple waxay bilaabi doontaa adeegga telefishanka ee soo dejinta inta lagu jiro 2019 sida uu ku faray agaasimaheeda.
Hadda waxaa laga heli karaa Spain si ay awood ugu yeeshaan inay ku raadsadaan heesaha ereyadooda ku jira Apple Music
Isbaanishku wuxuu horeyba ugujiray liiska wadamada la jaan qaadaya shaqadan cusub ee Apple Music taas oo kuu ogolaaneysa inaad ku raadsato heesaha heesahooda.
Soosaarka iphone-ka ayaa hoos loo dhigi doonaa 10% rubuckan
OtterBox wuxuu ku biirayaa Gorilla Glass ilaaliyaasha shaashadeeda soo socota
Ragga ka yimid Otterbox ayaa la yaabay markii ay la midoobeen Gorilla Glass si ay u bilaabaan Amplify, noocyada cusub ee ilaaliyayaasha shaashadda ee iPhone iyo iPad.
Kiiska hufan ee € 45 iyo qiimaha kale ee macquulka ah ee Apple
Waxaad galeysaa Apple Store mana ku dhalaalineysid miisaska alwaaxa ah ee aadka u qurxoon, aad u dhalaalaya iyo ...
Belkin Hada waxay siisaa MFi Certified USB-C fiilooyinka hillaaca
Hadda Belkin wuxuu sii daayay USB-C illaa hillaaca hillaaca oo leh qalab adag iyo shahaado MFi ah oo ka dhigaysa fiilada ugu dhow.
Kaaliyaha Google ayaa goor dhow imanaya Khariidadaha Google ee iOS
Google waxay ku dhawaaqday in khariidadaha Google ay si dhakhso leh isugu dari doonaan kaaliyeyaashooda gacan qabka ah ee Google Assistant si ay noogu fududeeyaan socdaaladeenna
Satechi waxay bilaabeysaa xeedho cusub oo ay ka qaaddo dhowr aaladood isla waqtigaas
Labada xeedho ee cusub ee Satechi ee lagu soo bandhigay CES 2019 waxay u oggolaanayaan aalado badan oo leh USB-C iyo dekedda USB-A in isla mar la soo dallaco.
Qaar ka mid ah dareemayaasha Aqoonsiga Face-ka ayaa lagu qarin karaa shaashada gadaashiisa
IPhone cusub X, XS, XS Max iyo XR waxay leeyihiin naqshad guud oo ay kujiraan, waxkastoo dhan, ...
Ring wuxuu bilaabayaa isgaarsiin kale oo fiidiyoow ah iyo 'HomeKit' oo mar kale la la'yahay
Ring ayaa soo bandhigtay Door View Cam, oo ah fiidiyoow cusub oo fiidiyoow ah, oo leh kan ugu fiican calaamadda laakiin aan lahayn HomeKit markale.
LG sidoo kale waxay gacan qaadaysaa AirPlay 2 iyo HomeKit alaabteeda
Hadda LG wuxuu ku dhawaaqay in dhamaan TV-yadu ay noqon doonaan AirPlay iyo HomeKit iswaafajin inta lagu jiro CES 2019.
Samsung sidoo kale dakhligeeda hoos ayuu u dhacaa sidoo kale wuxuu Shiinaha "ku eedeeyaa"
Samsung ayaa hadda ku dhawaaqday hoos u dhac ku yimid dakhliga, waxayna u aragtay inay ku habboon tahay in la raaco istiraatiijiyadda Tim Cook oo Shiinaha lagu eedeeyo burburka.
Pandora wuxuu barnaamijkiisa u bilaabayaa Apple Watch oo u ogolaanaya soo dejinta heesaha
Soosaarayaasha adeegga qulqulka muusikada Pandora waxay ku cusbooneysiiyaan barnaamijkooda nooc cusub oo loogu talagalay Apple Watch oo leh qaab lagu ciyaaro offline
IPad Pro wuxuu gooyaa wax ka yar moodeellada kale, laakiin wax badan buu muujinayaa
Apple wuxuu sharraxayaa habka wax soo saarka ee iPad Pro wuxuuna isku dayaa inuu helo cudurdaar Bendgate oo daadadku gelinayaan shabakadaha
Apple on the stringrope wuxuu sii wadaa inuu jebiyo diiwaanada: App Store wuxuu soo saaray $ 322 million sanadka cusub
Kadib wararkii xumaa ee suuqa saamiyada ee wiilashii ka imaaday Cupertino, waxay ku dhawaaqeen in maalmaha Kirismaska ​​iyo Sannadka Cusub ay jabisay diiwaanada dakhliga ee App Store.
Apple miyuu u dhintey guul mise siyaasadiisa qiimeynta ayaa dishay?
Runtii ma waxaan wajahaynaa dhamaadka Apple? Aynu yara dul istaagno ujeedo ujeedo ah xaalada ka dib shilalka suuqa saamiyada ee Apple.
Sannad cusub, alaabooyin cusub? Muxuu 2019 innagu hayaa?
Apple waxay yeelan doontaa sanad buuxa oo ah soo bandhigida alaabooyin cusub iyo adeegyo cusub. Intaa waxaa dheer, waxay yeelan doontaa himilada hagaajinta Siri iyo Apple Music.
Bilaabashada ugu wanaagsan ee Apple ee 2018
Tani waa soo koobitaankii ugu fiicnaa ee Apple soo bandhigtay inta lagu gudajiray sanadkan 2018 halkaas oo aad ka heli karto badeecada qiimaha ugu fiican.
Apple waxay qaadan doontaa soosaarka iphone-ka heerka sare Hindiya
Apple waxay u qaadan kartaa soosaarka iphone-ka heerka sare dalka Hindiya, si ay ula kulanto dalabka dowlada ugana fogaato kororka canshuuraha ee alaabada lagu sameeyo Shiinaha.
IPhone XS Max ayaa ku qarxa jeebka isticmaalaha Ohio
Adeegsade ka socda Columbus Ohio ayaa soo sheegaya qarax ka dhacay iPhone XS Max oo jeebka surwaalkiisa ku jira, iyo Apple Store ma garanaynin sida loo caawiyo ...
Apple wuxuu ku soo laabtay maxkamadda, markan codka Cibraaniga ah ee Siri
Haweeneyda codka siisa afka Cibraaniga ee Siri ayaa Apple ka dacweysay iyadoo tixgelineysa in isticmaalka ay u siinayaan codkeeda "uusan ahayn mid sharci ah".
Midabka Daadka, ku dhawaaqida cusub ee Apple ee iPhone XR
Apple waxay daabacday xayeysiis cusub oo kor u qaadaya iPhone XR, oo si gaar ah u muujinaya ubaxyo loogu talagalay muuqaalka Liquid Retina iyo tayadiisa.
HomePod horeyba wuxuu awood ugu leeyahay inuu kajawaabo 25% in kabadan bilowga sanadka
Horumarka Siri ee HomePod waa la arki karaa iyadoo lagu mahadinayo daraasaddan cusub ee hubineysa inay ka jawaabeyso 74% su'aalaha la weydiiyay.
Tesla iyo Microsoft ayaa Apple uga fiicnaaday asturnaanta, sahan la helay
Sida laga soo xigtay xisaab ku saabsan shirkadaha sida ugu fiican u maareeya xogta isticmaalaha, Tesla iyo Netflix waa shirkadaha ugu amniga badan arrintan.
Apple wuxuu sii daayaa nooc labaad oo ah kii ugu dambeeyay ee iOS 12.1.2
Ragga ka socda Cupertino waxay la yaabeen iyagoo sii daayay dhisme cusub oo iOS 12.1.2 ah oo hagaajinaya cilladaha yaryar kana ilaalinaya sii deynta iOS 12.1.3 cusub.
Shirkadaha Shiinaha qaarkood ayaa ku biiraya qaadacaada ka dhanka ah Apple
Instagram ayaa ku xirxiray cusbooneysiintiisii ​​ugu dambeysay: waxay lumisay taageerada iPhone XR iyo XS
Cusbooneysiinta cusub ee 'Instagram' waxay ka dhigtay barnaamijka inuu u ekaado mid qariib ah oo wareersan oo ku saabsan iPhone XS iyo XR sababtoo ah luminta fiicnaanta.
Xog cusub ayaa muujineysa in App Store uu ku sii socdo xawaare wanaagsan
Daraasad cusub ayaa sheegtay in App Store ay ku guuleysatay inay laba jibaarto tirada horumariyaasha si ay u gaaraan hal milyan oo doolar marka loo eego Play Store-ka sanadka 2018.
PlayStation wuxuu bilaabayaa halyeeyga Lemmings ee macruufka si bilaash ah
PlayStation ayaa kadis ku ah isla markaana soo saarta halyeeyga Lemmings kulankeena iPhone iyo iPad. Ciyaar aan ku raaxeysan karno bilicdeeda oo dhan bilaash.
Qalab kasta oo leh Alexa wuxuu la jaan qaadi doonaa Apple Music
Xogta ugu dambeysa waxay soo jeedineysaa in Apple Music ay ku sii fidi karto dhammaan kuwa ku hadla Alexa, wixii ka baxsan Amazon Echo.
Facebook wuxuu diyaarin lahaa cryptocurrency u gaar ah si uu ugu isticmaalo WhatsApp
Sida laga soo xigtay xogta ka socota Bloomberg, ragga ka socda Facebook waxay ka fikirayaan inay bilaabaan koodhadhkooda gaarka ah ee loo adeegsado WhatsApp loogu talagalay micropayments.
Fadeexad cusub: Facebook waxay marin u siisay fariimahaaga shirkadaha sida Netflix ama Spotify
Dhowr saacadood ka hor ayaa la daabacay in Facebook uu u oggolaaday shirkadaha qaarkood inay galaan oo ay wax ka beddelaan farriimaha gaarka ah ee isticmaaleyaasha.
Iyadoo animation-kan cusub, Apple wuxuu doonayaa inuu ka fogaado xannibaadda shirkadda Qualcomm ee Shiinaha
Apple waxay xaqiijineysaa in nooca ugu dambeeya ee iOS ee ay bilaabeen dhowr maalmood ka hor, ay xallinayaan dhibaatada garsoorka ee ay wajaheyso Qualcomm
IPhones waxay yeelan karaan Aqoonsiga Face iyo Touch ID isla waqtigaas
Iyada oo cusub iPhone X, XS, XR iyo XS Max, Apple waxay si cad u sheegtay in moodooyinka cusub ee ...
Apple waxay ku dheelitiraysa Apple Music dhexgalka Amazon Echo
Apple waxay kor u qaadday dalabka Amazon Alexa si macaamiisha Apple Music ay u ogaadaan wax ku saabsan la qabsashada Amazon Echos.
Apple waxay u wareejin doontaa wax soo saarka iPhone-ka Pegatron si ay uga gudubto qufulka Shiinaha
Si loo isku dayo in looga gudbo xayiraadda iibka taleefannada iphone ee Shiinaha, Apple wuxuu damacsan yahay inuu u wareejiyo wax soo saarka shirkadda Pegatron.
Kuwani waa furayaasha sirta ah ee ugu isticmaalka badan 2018
SplashData waxay daabacday warbixinta sanadlaha ah ee furayaasha sirta ah ee inta badan la isticmaalay sanadka 2018 oo dhan lagu falanqeeyo.
PlayAppleMusic, oo ah ciyaariyahan websaydh ah oo aad u xiiso badan Apple Music
Horumar sameeye ayaa sameeyay PlayAppleMusic. Ciyaaryahan muusig ah oo Apple Music ah oo khadka tooska ah ku shaqeeya, il furan oo damacsan in uu dhowaan cusbooneysiiyo
Ming-Chi Kuo waxay hoos u dhigeysaa saadaasheeda iibka iphone u gaar ah 20%
Cusbooneysiin loogu talagalay macruufka ayaa lagu sii deyn doonaa Shiinaha taas oo joojin doonta mamnuucista iibinta taleefannada iPhone
Jennifer Garner ayaa ku jileysa taxane cusub oo loogu talagalay Apple oo uu hogaaminayo JJ Abrams
Waad ku mahadsan tahay taxanaha cusub ee qayb ka noqon doona Apple ee galka adeegga fiidiyowga, Jennifer Garner iyo JJ Abrams ayaa mar kale kulmi doona
Apple waxay ka shaqeyn kartaa "Apple Music for Business"
Apple waxay astaan ​​u tahay Apple Music ee Ganacsiga, taas oo noqon karta adeeg lagu ciyaaro muusikadaada dhagaystayaal badan.
Apple ma rabto inuu ku biiro akhristaha faraha shaashadda ama jiirarka
Imaatinka Samsung Galaxy A8s waxaan heleynaa sida ay Samsung uga go'an tahay "freckle", waa sida aan u socdo ...
PlayStation App waxaa lagu cusbooneysiiyaa dalabyo shaqsiyeed
Waxaan helnay cusbooneysiin cusub oo ku saabsan barnaamijka 'PlayStation App' kaas oo, iyo waxyaabo kale, noo oggolaan doona inaan ka shaqeyno dalabyada shakhsi ahaaneed ee tababarkayaga.
Apple waxay siisaa qiimo dhimis HomePod haddii aad ka tirsan tahay Apple Music
Ma waxaad tahay macmiil Apple Music ah? Nasiib waad ku jiri kartaa! Appe waxay u sameyneysaa qiimo dhimis HomePod si loogu dabaaldego ciidaha.
Algoriddim wuxuu furayaa 'Djay' cusub ee loogu talagalay macruufka inuu noqdo mid bilaash ku ah habka lacag bixinta
Ragga ka socda Algoriddim waxay beddelaan moodeellada ganacsi ee Djay iyagoo ka dhigaya mid bilaash ah iyadoon xaddidnayn shaqooyinkooda wax badan, haa, sidoo kale waxaa jira nooc pro lacag ah.
Apple ayaa laga mamnuucay iibinta iphone-ka dalka Shiinaha
Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu qiyaasaa garaaca wadnahaaga haddii aad taabato Digital Crown
Sida laga soo xigtay macluumaadka ugu dambeeyay, Apple Watch Series 4 wuxuu bixiyaa cabbiraadyo dhammaystiran oo dhaqso badan oo ah garaaca wadnaha haddii aan taabno Digital Crown
Khariidadaha Google ayaa kuu soo bandhigaya tab cusub "adiga"
Nidaamka hagidda iyo khariidadaha Google ayaa wali sifiican uga horeeya midka ay Apple u fidisay adeegsadayaasheeda, ...
Apple Pay ayaa diyaar ku ah Jarmalka
Wax walba waxay muujinayaan in si rasmi ah loo bilaabay Apple Pay ee Jarmalka horay loo diyaariyay waana arrin saacado ah.
Netflix waxay soosaaraysaa xaddi aad u tiro badan oo dakhli ah iyada oo ay ugu wacan tahay macruufka
Warku wuxuu daadanayaa in Netflix ay kasban lahayd 47% dakhli intaa ka sii badan iyada oo loo marayo codsiyada moobiilka marka loo eego sanadkii hore.
Apple wuxuu bilaabayaa iibinta Beddit 3.5 Sleep Monitor
FCC waxay iftiinka cagaaran siisay wax soo saarka cusub ee Beddit: Beddit 3.5 Sleep Monitor, oo bilaabay in lagu iibiyo websaydhka rasmiga ah ee Apple.
Apple wuxuu cusbooneysiiyaa barnaamijka WWDC si uu uga dhigo mid la jaan qaadi kara iPad Pro-ka cusub
Apple waxay go'aansatay inay cusbooneysiiso barnaamijkeeda loogu talagalay WWDC. Noocani waxaa loogu talagalay iPad Pro-ka cusub oo ay ku jiraan wax-soo-saar yar yar.
Haddii aad ka yar tahay 22 sano jir, ma awoodi doontid inaad adeegsato howlaha ECG ee Apple Watch Series 4
Sii deynta watchOS 5.1.2 ayaa shaaca ka qaaday in kuwa ka yar da'da 22 aysan marin u helin barnaamijka ECG ee Apple Watch Series 4.
Saamaynta Beddit: Apple wuxuu diiwaangeliyaa 'kormeeraha hurdada' ee FCC
Beddit waxaa helay Apple in ka badan sanad ka hor. Maanta, FCC waxay u xaqiijisay Apple diiwaangelinta "buurta riyada".
macruufka 12 waxaa laga heli karaa 70 aaladaha ay taageerayaan
3 bilood ka dib markii la sii daayay, macruufka 12 waxaa laga helaa 70% dhammaan qalabka la taageerayo.
iHome waxay soo saareysaa alaabooyin cusub oo ku habboon Alexa
Xaaladdan oo kale, shirkadda iHome waxay ku soo booday Alexa bandwagon iyada oo bilawday saacad digniin ah iyo muraayad qurxiyo.
Muusikada Apple ayaa iska kaashaneysa ku dhawaaqida Musharaxiinta Grammy
Abaalmarinta muusikada waa goob wanaagsan oo lagu arko sida ugu fiican ee farshaxan kasta u nool yahay, waxay dhacdaa sannad kadib ...
Muusiga Apple wuxuu si gaar ah ugu dhawaaqayaa 2018 Grammy Nominees
Apple Music ayaa ku dhawaaqi doonta magacyada in kabadan 60 qaybood ee Grammys 2018, abaalmarinta muusikada caanka ah.
Arlo wuxuu soo bandhigayaa kamarad ilaalin ah 4K oo leh HDR
Munaasabaddan Arlo waxay dooneysaa inay naga farxiso bilawga kamarad ilaalin ah oo leh duubista 4K iyo teknolojiyadda HDR.
Apple waxay sii wadaa inay si xoogan u taageerto ololayaasha AIDS-ka
Maalinta caalamiga ah ee ka dhanka ah AIDS-ka bishii Diseembar 1, shirkadda Cupertino ayaa mar kale midab ...
Apollo for Reddit waxay dib u cusbooneysiineysaa qeyb ka mid ah isdhexgalka waxayna bilaabeysaa warar xiiso leh
Apollo waa codsi aan kula tashan karno koontadayada 'Reddit'. Waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 1.4 oo leh warar xiiso leh.
Dagaalada ciyaaryahanka Pokémon GO ayaa soo socda dhawaan
Niantic waxay adeegsatay bogeeda Twitter-ka si ay ugu dhawaaqdo in goor dhow aan awoodi doonno inaan aragno qaabka PVP ee dagaalka u dhexeeya ciyaartoyda Pokémon GO.
Apple wuxuu bilaabay olole cusub 'Shot on iPhone' oo ay kujiraan dad caan ah oo loo yaqaan 'Decotoras Japanese'
Wiilasha Cupertino waxay sii wadaan toogashada ololaha iPhone-ka iyagoo fiidiyoow ku jilaya Lady Misaki, oo ah caan ka soo jeeda Japan.
Apple waxaa laga dacweeyay isticmaalka miirayaasha boodhka ee Macs
Maqnaanshaha miirayaasha boodhka ee iMac iyo MacBook ayaa Apple u horseeday maxkamad sababo la xiriira dacwad ay soo gudbiyeen isticmaaleyaasha Mareykanka.
Shirkadda Qualcomm ayaa ku dhow inay heshiis la gaarto shirkadda Apple
Waxaan nahay maanta, sidaa darteed ma lihin wax kale oo aan ka sheegno cutubka xiga ee sheekada xun ...
Barnaamijka 'Spotlights' waa la cusbooneysiiyay si loogu daro iPad Pro cusub
IOS si joogto ah ayey u kordheysaa, sidaa darteedna in aakhirka ay wax dhaceen oo aan si dhib yar u rumaysan karno, ...
Heerka korsashada ee iOS 12 ayaa sii kordheysa, oo taagan 70%
In kabadan 70% aaladaha horeyba waxaa loogu rakibay iOS 12. Qiyaastan korsashada waxay ka badantahay tirooyinka iyo waqtiyada laga helay iOS 11.
Apple Pay waxay si rasmi ah uga soo bilaabatay Belgium
Beljimku hadda waa waddan kale oo Apple Pay uu si rasmi ah ugu faafo.
iCloud wixii cusbooneysiin ah ee Windows iyo qaladaadkiisa ayuu hagaajiyaa
Apple iyo Microsoft waxay shaaciyeen inay ka shaqeynayaan xal dhowaan soo socda. Hadda Apple waxay u soo saartay cusbooneysiin ku socota iCloud ee Windows ee xalliya dhibaatooyinka.
Apple Waxay Bartaa Arday Badan Oo Barnaamij Siiya Inta Lagu Jiro Toddobaadka Tacliinta Sayniska Kombuyuutarka
Apple waxay kordhisaa lacagta ay bixiso si loogu cusbooneysiiyo iPhone-kaaga hore mid cusub, oo hadda kaliya ku yaal Mareykanka
Tallaabo xaqiijineysa in iibka Iphone uusan la mid aheyn sanadaha kale, Apple waxay dooneysaa inay dhiirigaliso iibinta iphone-yada cusub, iyadoo kordhineysa qadarka ay siineyso bixinta qalabkii hore.
Animoji-ka Apple wuxuu yeelan doonaa saameyn cod oo ku saleysan tilmaanta
Hada Animoji-ku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto saamaynta codka dabeecadaada iyadoo lagu saleynayo muuqaalka wajigeena.
Shirkadda Samsung ayaa raaligalin ka bixineysa cudurka kansarka ee ku dhacay shaqaalaha warshaddeeda
Samsung waxay sii wadi doontaa inay magdhow siiso ilaa 116.000 euro qaar ka mid ah shaqaalaheeda wershadaha oo laga yaabo inuu kansar ku dhacay sababtan.
Apple waxay xoojineysaa taageerada haweenka ganacsatada ah ee ku jira Kaamkeeda
Boqortooyada Rush Aargoosiga, soo celinta ugu wanaagsan ee Difaaca Tower
Mid kamida kuwa ugu caansan difaaca sagas wuxuu la soo laabanayaa qayb cusub oo ilaalinaysa dhammaan wanaaggeeda iyo xulashooyinka cusub.
Go'doominta Apple waxay ka hortageysaa koritaanka Stickers-ka WhatsApp
Mar labaad, kantaroolka Apple ee App Store wuxuu caan ku yahay inuu ka hortago soo saarista istiikarada cusub ee WhatsApp.
Apple waxay dooneysaa inay hagaajiso badhanka saxaafadda xitaa iyadoo la adeegsanayo kiis
Apple waxay rabtaa inay tixgeliso in dadka isticmaala ay u adeegsadaan kiisaska difaaca waxayna doonayaan inay hagaajiyaan khibrada isticmaalaha markay riixayaan badhanka.
Muhiimadda ay leedahay ka-qaybgalka Apple ee arrimaha caafimaadka
Daabacaadda loogu talagalay bulshada ee Diiwaanka Caafimaadka ee API ee 'Apple Health Records' waxaa ku jira horumarin ku saabsan maaraynta caafimaadka dad badan oo ku nool Mareykanka.
The hoverboards ugu fiican in ay si toos ah ugu xidhi aad iPhone
Nala joog oo soo hel kuwa hoverboard-yada ugu xiisaha badan si toos ah ugula xiriiraan iPhone-kaaga qaab fudud.
Soo ogow sawirada cajiibka ah iyo shineemooyinka lagu sawiray iPhone XS Max
Waxaan soo bandhigeynaa sawirrada uu duubay shaneemeeye isaga oo wata iPhone XS Max iyo mid ka mid ah xasiliyayaasha ugu fiican suuqa.
Apple waxay bilaabmaysaa Jimcaha Madow oo leh Maalmo wax iibsasho oo Apple gaar ah
Apple waxay soo bandhigeysaa dalabkeeda jimcaha ee madoow inta lagu jiro usbuucaan oo aan ku heli karno kaararka hadiyadaha annagoo iibsaneyna badeecadahooda xayeysiinta ah.
Apple wuxuu ku guuleystay Abaalmarinta Addoonsiga xaaladaha wanaagsan ee shaqada
Angela Ahrendts ayaa magaalada London ka qaadatay abaalmarinta addoonsiga iyada oo ku dhawaaqday in ay ka mid noqon doonaan dumar looga faa'iidaystay tafaariiqdooda.
MeasureKit - AR waxay rabtaa inay la tartanto barnaamijka Cabbiraadda Apple
MeasureKit - AR waxay u timid inay wajahdo Cabbiraadaha Apple oo leh hawlo badan iyo astaamo badan oo ka faa'iideysanaya Xaqiiqada Dareenka ee iOS.
Qolka madow wuxuu ku degaa iPad-ka oo leh xilli beta ah
Bergen Co, abuuraha Darkroom, wuxuu go'aansaday imaatinka cusub ee iPad Pro inuu ku soo bandhigo arjiga shaashadda weyn ee leh waqtiga beta.
Apple wuxuu ku adkeysanayaa: iPad-ka cusub ee cusub wuxuu noqon karaa kombiyuutarkaaga xiga
IPad Pro waa aaladda calanka ee wiilasha Cupertino ka dib Keynote ugu dambeysay. Way dhammaadeen iPhone-kii si loogu banneeyo kiniinka cusub Ragga ka socda Cupertino waxay bilaabeen meel cusub oo ay ku adkeysanayaan beddelka iPad-ka cusub uu ka sameyn karo kombuyuutarrada caadiga ah.
Apple waxay yareyneysaa soo saarida dhammaan iphone-yada sababo la xiriira baahi la'aan
Sida laga soo xigtay khubarada, Apple ayaa si weyn hoos ugu dhigtay soo saarista iphone-ka maxaa yeelay aad ayey u qiimeysay baahida.
Noocyada dhaqanka ayaa sharad ku gala Smartwatch
Haatan xafiiltan adag ayaa ka soo baxaya suuq ay Apple Watch xukuntay, noocyada dhaqanka ayaa sidoo kale bilaaba saacado casri ah.
Apple wuxuu ku dhawaaqay afar maalmood oo iib ah Jimcaha Madow
Sannadkan Apple waxay diyaarinaysaa afar maalmood oo iib ah iyo dalabyo ay kugu soo iibsaneyso alaabtaada qiimaha ugu fiican, waana wax si kadis ah noo nagu qabsaday.
Satechi wuxuu bilaabay USB-C Hub ugu horeeyay ee iPad Pro cusub HDMI 4K, Minijack, USB-C, iyo USB-A
Soo saaraha qalabka iDevices, Satechi, ayaa ka horeeya iyadoo la bilaabayo USB-C Hub cusub oo loogu talagalay iPad Pro cusub oo leh 4 weji cusub.
Tifatirayaasha Apple News waxay la dagaallamaan wararka been abuurka ah
Daabacayaasha Apple News ee Australia ayaa mas'uul ka ah sifeynta wararka u muuqda arjiga si looga hortago faafinta wararka been abuurka ah.
Insignia waxay ku bilaabaysaa nidaamka garaashka garaashka casriga ah 'HomeKit'
Tani waa sida Insignia u soo bandhigto shey cusub oo lagu maareeyo furitaanka albaabkeena garaashka leh isdhexgalka HomeKit.
Microsoft iyo Apple waxay durbaba isku dayayaan inay xalliyaan dhibaatooyinka iCloud ee Windows
Ugu dambayntii waxay u muuqataa in dagaalku dhammaaday oo Apple gacan qaadday Microsoft si ay isugu dayaan inay u xalliyaan dhibaatooyinka baaxadda leh ee ay iCloud ku haysato Windows-ka.
Niantic waxay daabacdaa filimka 'Harry Potter: Wizards Unite', ciyaarta xaqiiqda cusub ee la kordhiyay
Niantic waxay soo saartay trailer-kiisa cusub ee xaqiiqda ciyaarta la kordhiyay ee la sii dayn doono sannadka 2019. Waa Harry Potter: Wizards Unite.
Iibsiga Finisar waxaa lagu xiray qiime dhan 332 milyan oo euro
Iibsiga Finisar waxaa lagu xiray qiime dhan 332 milyan oo doolar
Iibiyaasha Qeybta IPhone Hoos u Dhiga Saadaasha Dakhliga
Apple waxay hoos u dhigeysaa amarada qeybaheeda kala duwan ee iPhone-ka ee ka imanaya qeybiyeyaasha kala duwan, kuwaasoo ku dhawaaqaya hoos u dhac ku yimid saadaasha dakhliga.
Legrand waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeysaa iibsashada Netatmo
Sonos wuxuu ku daadiyaa Alexa dhammaan qalabkiisa Isbaanishka
Nala joog si aad u ogaato waxa cusub ee Sonos soo bandhigay iyadoo la kaashanayo Alexa si noloshaadu u fududaato.
Apple waxay kireysaa shirkadda wax soosaarka indie A24 oo mas'uul ka ah filimka Moonlight iyo Ex Machina
Ragga ka socda Cupertino waxay la yaabaan oo kireystaan ​​abaalmarinta Oscar-ka, iyo in ka badan xiiso, soo saare A24 iyadoo la fiirinayo mashaariicda filimada soo socda.
Apple waxay u socotaa Qualcomm, hadda waxay "xadaan" shaqaalaha
Apple waxay la dagaallameysaa Qualcomm oo waxay "xadayaan" injineerada si ay u sameyso processor-keeda.
Netflix waxay qorsheyneysaa rukhsad moobil ah oo keliya
Netflix sidoo kale waxay rabtaa inay tixgeliso suuqan suuqyada waxayna qorsheyneysaa inay soo bandhigto rukumo ka jaban oo kaliya si looga daawado moobiilka.
Mustaqbalka shaashadaha: Infinity Flex, guddiga Samsung ee isku laaban
Samsung waxay soo bandhigtay qalabkii ugu horreeyay oo leh teknoolojiyad Display Display Infinity Flex. Taasi waa, shaashad isku laaban oo shaqeyneysa.
Saamiyada Apple ayaa sii wadaya isu soo baxa ka dib hoos u dhac weyn
Shirkadda Nike ayaa toddobaadkan soo saaraysa saddex xarig oo Apple Watch ah
Nike wali waxay kujirtaa qaab wanaagsan wiilashii Cupertino waxayna uso bandhigi doontaa sadex xarig oo cusub Apple Watch todobaadkan, labo kamid ah ayaa milicsanaya.
Volkswagen waxay isu diyaarineysaa inay dhexgeliso Siri Shortcuts gawaarideeda
Volkswagen ayaa wali ku jirta safka hore markay tahay CarPlay waxayna soo bandhigi doontaa tuuryooyinka 'Siri' si loo maareeyo shaqooyin kala duwan.
Aqoonsiyada Apple qaarkood ayaa si aan macquul ahayn loo qufulay
Guul darrooyinka ku habsaday server-yada Apple ayaa sabab u ah in qaar badan oo ka mid ah dadka Apple-ka ah ee adeegsada adduunka oo dhan ay ka warbixiyaan dhibaatooyinka iyo shilalka ka dhacaya ID-gooda Apple.
Cloudflare waxay bilaabeysaa barnaamijkeeda 1.1.1.1 si ay uga dhigto wax aad u fudud in loo beddelo DNS-kaaga
Ragga ku jira Cloudflare waxay rabaan inay sii wadaan inay naga dhaadhiciyaan DNS-keeda gaarka ah (1.1.1.1) oo ay la socdaan barnaamij cusub oo fududeynaya beddelka DNS-ka ee iOS.
Xidhmooyinka istiikarada waxay toos u keenaan istiikarada Telegram-ka WhatsApp
Hadda Telegram waxay soo saartay xirmo istiraatiijiyad u gaar ah oo loogu talagalay WhatsApp waxaadna ku soo dejisan kartaa halkan bilaash.
Apple waxay isticmaali kartaa nidaamka anteeno isku dhafan sanadka 2019
Falanqeeyayaashu waxay soo jeedinayaan in shirkadda Cupertino ay adeegsan doonto nidaam anteeno cusub oo isku dhafan oo ka tirsan iPhones-ka 2019.
The watchOS 5.1.2 cusub wuxuu ku dari doonaa xakamaynta Walkie-Talkie ee Xarunta Xakamaynta
Ruuxda sii wadida hagaajinta Apple Watch Series 4 cusub, Apple wuxuu diyaarinayaa imaatinka Walkie Talkie ee Xarunta Xakamaynta oo leh watchOS 5.1.2
IPhone XR waxay diideysaa in lagu iibsado walaalahooda hortooda
Xogtii ugu dambeysay ee uu bixiyay John Vinh, waxay hubineysaa in dukaamada ay urursanayaan 3-maalin wax lagu keydiyo iPhone XR, oo aan sifiican u iibineynin.
Taabashada iPhone X-gaagu ma dhacdaa mararka qaarkood? Apple waxay bilawday barnaamij dayactir ah
Apple wuxuu bilaabay barnaamijka bedelka shaashadda ee loogu talagalay dadka isticmaala ee la kulma arrimaha xasaasiga ah ee iPhone X.
Haptic Touch, badbaadiyaha badbaadada iPhone XR si looga dhigo la'aanta 3D Touch
Haptic Taabashadu waa beddelka 3D-ta hore ee iPhone XR: cadaadiska shaashadda ayaa wax laga beddelay iyadoo fartaada lagu hayo shaashadda.
Apple waxay heshiis la gaadhay shirkadda Amazon si ay u iibiso wax soo saar badan
Toddobaadyada soo socda, Amazon waxay bilaabi doontaa inay ku iibiso qiimaha caadiga ah ee Apple, iPhone, iPad, Apple Watch iyo aaladaha kale ee Apple.
Kuwani waa qaar ka mid ah dhinacyada qalinka cusub ee Apple ee laga yaabo inaadan aqoon
Qalinka Apple ee cusub ee 'Apple Pencil' waxaa ku jira ku shubida lacag la'aanta iyada oo loo mahadcelinayo isku xidhka magnet-ka ee iPad Pro, laakiin kuwan waa waxyaabaha aadan ka ogayn.